Indawo entle eCasablanca ecaleni kolwandle
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMónica
Ifulethi lipholile, lifakwe kwaye lihonjiswe ngemifanekiso yaselwandle.
Imalunga neemitha ezingama-70 kuphela. ukusuka elunxwemeni kwi-Alcalá del Río complex yeCasablanca yeholide.
Isakhiwo sinedama lokuqubha kunye nokhuseleko olusisigxina ngaphakathi kwekhondom encinci ejikelezwe ziigadi, enamagumbi ali-12 kuphela, aqinisekisa ukuzola kunye nokukwazi ukonwabela ngokukodwa iindawo eziqhelekileyo ezinje ngedama lokuqubha, iindawo zokuhlala elangeni kunye neegadi.
Iindleko zokurenta zinexabiso elisisiseko kubantu abane ngobusuku obubodwa obubekwe ngokuzenzekelayo yiplatifomu kwaye iya kuphuma kuwe xa usenza umbuzo kwaye ubeke inani elichanekileyo leendwendwe eziya kuhlala. Ixabiso lesiseko liyaguquguquka phakathi kwe-50 kunye ne-65 usd ngokuxhomekeke kwixesha. Abantu abongezelelweyo bahlawula i-15 usd ngobusuku.
Le ndlu inefenitshala epheleleyo kwaye inekhitshi kunye namagumbi amabini okulala. Zonke iindawo zihonjiswe ngemifanekiso yaselwandle kwaye zinabalandeli, iTV, iDVD kunye neDirecTV Prepaid (cela ikhowudi ukuba ube nale nkonzo). Indawo yokuhlala inamanzi ashushu kwiishawari nakwisinki yasekhitshini. Ikhitshi lihonjiswe ngombane ukwenzela ukhuseleko olukhulu kwaye lineoveni eyakhelweyo. Ngokunjalo, kukho indawo yokupaka i-1, intente kunye nezitulo zaselwandle zeendwendwe.
Ifulethi linendawo entle ejonge echibini, iigadi kunye neenduli zaseCasablanca. I-terrace inetafile kunye nezihlalo, kunye ne-armchair kunye ne-cushions, okwenza kube yindawo efanelekileyo yokuphumla kunye nokuzonwabisa.
Ikwafumaneka kumgama weemitha ezingama-70 ukusuka elunxwemeni lwaseSame, oluzolileyo, olukhuselekileyo nobubanzi.
*Kukho ukhetho lokuqesha yonke imihla inkonzo yasekhaya yokucoca indlu, isidlo sakusasa kunye nesidlo sasemini ngexabiso elongezelelweyo le-$20 ngosuku, ekufuneka ihlawulwe ngemali ezinkozo ngqo kumntu owenza inkonzo.
* Amashiti aya kubonelelwa ngeebhedi ezi-4 kunye neetawuli kwiindwendwe ezi-6. Ukuba ugcino lwakho lolwabantu abangaphezu kwe-6, nceda uze namaphepha kunye neetawuli zabantu aba-2 ngaphezulu. Ayibandakanyi iitawuli zaselwandle.
4.61 ·Izimvo eziyi-155
4.61 · Izimvo eziyi-155
ICasablanca yeyona ndawo ikhethekileyo yokuphumla elwandle kweli lizwe, isitayile seMeditera esikummandla wonxweme olubanzi noluzolileyo kwelinye icala, kwaye kwelinye, iinduli eziluhlaza eziqhelekileyo kwiphondo lase-Esmeraldas.
Ineenkonzo zolonwabo kunye nezemidlalo ezifana nenkundla yentenetya, iklabhu yegalufa, ivenkile enkulu, imarike yokutya kwaselwandle, iindawo zokutyela (ipizza, ukutya kwaselwandle, icrepes, ibarbecue).
Ngamaxesha aphezulu kukho isibonelelo semidlalo yamanzi, i-skydiving, ukukhwela izikhephe, ukubukela i-whale, phakathi kwabanye.
I-Casablanca ikufuphi ne-Atacames resort, iilwandle zaseMompiche naseTonsupa, kunye nemizuzu emi-5 ukusuka kwidolophu yaseTonchigue, apho unokuthenga khona ukutya, ikhemisi kunye nabanye.
Umbuki zindwendwe ngu- Mónica
Kuzo zonke iinkcukacha neenkxalabo zeendwendwe, ziya kuqhagamshelana nam ngokuthe ngqo ngo-Airbnb. Ndihlala ndizama ukuphendula ngokukhawuleza kuzo zonke iinkxalabo zeendwendwe kunye namazwana. Ungalibazisi ukuqhagamshelana nam.
Izitshixo ziya kuhanjiswa ngunogada, okanye ngumntu wenkonzo yasekhaya ukuba uqeshiwe.
Kuzo zonke iinkcukacha neenkxalabo zeendwendwe, ziya kuqhagamshelana nam ngokuthe ngqo ngo-Airbnb. Ndihlala ndizama ukuphendula ngokukhawuleza kuzo zonke iinkxalabo zeendwendwe kun…